01 | February | 2020 | Danya Wadi
Archive | February 1, 2020
International court, finally, acts on the Rohingyas of Myanmar
By danyawadi February 1, 2020 Leaveacomment
KHMER TIMES January 31, 2020 Jay Manoj Sanklecha / HINDUSTAN TIMES Photo taken on Feb. 28, 2019 shows the United Nations Security Council holdingameeting on the situation on Myanmar, at the UN headquarters in New York. (Xinhua/Li Muzi) The inability of international law to effectively address situations of mass human rights atrocities, in […]
အသက်အငယ်ဆုံး ပါလက်စတိုင်းဆရာဝန်ရဲ့ စိတ်ကူး
အသက် ၂၀ အရွယ်ပါလက်စတိုင်းမိန်းကလေး အစ်က်ဘဲလ်ဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာဂင်းနစ်စံချိန်အရ သမိုင်း စဉ်ဆက် ယနေ့ချိန်ထိ ကမ္ဘာ့အငယ်ဆုံး ဆရာဝန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အစ်ကဘဲလ်အလ်အာဆတ်ဟာ ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံးဆရာဝန်ဖြစ်တယ်။ သူမသည်အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်မှာ ကျောင်းစတက်ခဲ့ပြီးတော့ အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ ကျောင်းပြီးခဲ့တာပါ။ သူမမိဘများ လက်ဘနွန်သို့ရောက်ရှိပြီးတဲ့နောက် ဘီကာချိုင့်ဝှမ်းရှိရွာငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဘားအိလီရစ်မှာ ဒုက္ခသည်အနေနဲ့ သူမကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင်အထက်တန်းပညာသင်ယူစဉ်ခဲ့တယ်။ အသက် ၁၃ နှစ်မှာ ကာတာနိုင်ငံ၌ဆေးပညာလေ့လာရန် ပညာသင်ဆုရရှိခဲ့တာပါ။ နောက်ဆုံးအသက် ၂၀ အရွယ်တွင် ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်၏ကာတာဌာန သက်တမ်းတလျောက် အသက် အငယ်ဆုံးဆေး ပညာဘွဲ့ရဖြစ်ရုံသာမက အငယ်ဆုံးအာရပ်ဆရာဝန်လည်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခဒေါက်တာ အီမဒ်မက္ကီပြောကြားချက်အရ ပထမ ကျောင်းစတက်တဲ့နေ့မှစ၍ သူမဟာရင့်ကျက်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျောင်းသားဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူမ၏စိတ်ကူးအိပ်မက်ကတော့ လက်ဘနွန် ဒုက္ခသည်စခန်းများရှိ ပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်များအတွက်အခမဲ့ဆေးခန်းဖွင့်ဖို့ […]
သံလျှင် GTC ကစုံတွဲ၏လုပ်ရပ်
မြန်မာ - English - အဘိဓါန် (Zawgyi)
Cervical Spondylosis: လည် ပင်း ကျီး ပေါင်း တက် နေ လို့
No. 1. Burmese Movie Provider
မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်မည့် နိုင်ငံခြားသား ဗီဇာ ပိတ်
ကုလအရာရှိအပါအ၀င် မြန်မာမှာ COVID-19 ကူးစက်သူ ၃ ဦးတိုး
ရခိုင်သတင်းဌာန ၂ ခု၊ AA တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များကို ဖုန်း အော်ပရေတာ ၂ ခုက ပိတ်
Corona virus panic grips Rohingya camps in Bangladesh
Stay at Home! အိမ်မှာပဲနေကြပါ
‘None of Us HaveaFear of Corona’: The Faithful at an Outbreak’s Center
Will the ICJ Myanmar Ruling Help Bring Accountability for the Rohingya Crisis?
အိမ်ပြင် မထွက်ရ အမိန့်ကို မလိုက်နာရင် စစ် အင်အားသုံး ရလိမ့်မယ်လို့ မလေးဝန်ကြီးဆို
ဧရာဝတီနဲ့ ရိုက်တာ သတင်းဌာနတွေကို တရား စွဲထား တဲ့ အမှုတွေ ရုပ်သိမ်း
US for putting pressure on Myanmar over Rohingya repatriation
No coronavirus among Rohingya refugees in Bangladesh: WHO
Is the ICJ ruling on Myanmaranew route to accountability?
မြန်မာ့ လူ့အခွင့်အရေး ရန်ကုန် ကန် သံရုံး အမြင်
တရုတျနိုငျငံ ဝူဟနျမွို့က အစ်စလာမျဘာသာဝငျမြား ဝူဟနျဗိုငျးရပျ ကူးစပျမူ မရှိ
မြန်မာ ICJ အမှု ဟားဗတ်ဥပဒေပညာရှင် မရည်မွန်ထွန်းရဲ့ အမြင်
ဘင်္ဂလားကပြန်လာအခြေချတဲ့ ရခိုင်တွေ အခြေအနေ
Coronavirus fear grips Rohingya camps in Bangladesh
Bangladesh rejects US human rights report as ‘one-sided’
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးကို အမေရိကန်စစ်ဖက်က ဝူဟန်မြို့သို့ ယူဆောင် လာခဲ့ကြောင်း တရုတ်က တရားဝင် ​ပြောကြား လိုက်ခြင်း
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကန်အစီရင်ခံစာထဲက မြန်မာလူ့အခွင့် အရေး အခြေအနေ
လွှတ်တော် အမတ် နဲ့ Reuters အပေါ် စွဲဆိုတဲ့ အမှု ပြန်ရုပ် သိမ်းဖို့ APHR တောင်းဆို
မြန်မာတပ်ရင်းမှူးနဲ့ တပ်မတော်သား ၃၀ ဖမ်းဆီး ထား ဟု AA ထုတ်ပြန်
The Truth About Myanmar’s Genocide Case Defense Lawyer
Myanmar’s Arakan Army Captures 30 Government Troops, Battalion Commander
တပ်ရင်းမှူးအပါ ၂၀ ဦးကို ဖမ်းမိထားကြောင်း AA ထုတ်ပြန် ချက် စိစစ်နေဟု ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းထွန်းညီ ပြော
တပ်မတော်ပါဝင်ခွင့် လျှော့ချရေး NLD ကြိုးပမ်းချက် လွှတ်တော်မှာ ရှုံးနိမ့်
မက္ကာရွိ မတ်စ်ဂျစ်ဒ်ဟရမ်ဗလီဝတ်ကြောင်းတော်ကို ဆော်ဒီ က ပြန်လည်ဖွင့်လွစ်
ရခိုင်အမတ်အပြင် ရိုက်တာ သတင်းဌာန ကိုပါ အမှုဖွင့် ထား ကြောင်း ရဲအတည်ပြု
France will continue to support for Rohingya repatriation
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သည် တရုတ်နှင့် အီရန် အတွက် အမေရိကန် ၏ ဇီဝလက်နက် ဖြစ် ဟု အီရန် ဗိုလ်ချုပ်ဆို
ရခိုင်ပြည်နယ် အင်တာနက် ဖြတ်တောက်မှုအပေါ် ဂမ်ဘီ ယာ တရားရေးဝန်ကြီး စိုးရိမ်
City of London revokes honour granted to Myanmar’s Suu Kyi
ဂျီနိုဆိုက်အကြောင်းဟောပြောတဲ့ ရှေ့နေ ဝီလီယံရှား ဘတ်စ်ကို ကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြ
ရခိုင်အရေးဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဖမ်းဆီးခံရ
ရိုဟင်ဂျာ ၁၆ ယောက် မင်းလှမှာ ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်စီချမှတ်ခံရ
Pulitzer Prize-winning photographer Cathal McNaughton’s Rohingya pics on show
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိုးရိမ် အဆင့် ရောက်ရှိနေပြီဟု WHO ကြေညာ ရုပ်သံ
More Than 2,200 Rohingya Caught Trying to Leave Myanmar by Sea Since 2015: Detainee List
မြောက်ဦးမြို့နယ်တွင် ပျောက်ဆုံးနေသူများအနက် လူလေး ဦး၏ ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ရှိ
OIC Committee discusses Rohingya Minority with UNGA President
UN appeals for $877m for Rohingya refugee response in Bangladesh
Myanmar pays rising price for Rohingya crisis
ပိုင်ရှင်မဲ့ ကျပ်ငွေ ၃၈ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါး နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်း
လေးလအတွင်း ရိုဟင်ဂျာငါးရာကျော် အဖမ်းခံရ
Categories Select Category ကျန်းမာရေး (533) ခရစ်ယာန်ဘာသာ (10) စာပေအက္ခရာ (4) ထူးဆန်းထွေလာ (125) နည်းပညာ (91) ဖတ်စရာကဏ္ဍ (5) ဗဟုသုကဏ္ဍ (24) ဗုဒ္ဓဘာသာ (78) မျက်မှောက်ရေးရာ (4) မှတ်စု (1,359) သတင်းများ (12,439) သမိုင်း (473) သုတစာပေကဏ္ဍ (64) အင်္ဂလိပ်စာကဏ္ဍ (58) သူ့အကြောင်း (363) အင်တာဗျူး(283) အစ္စလာမ်ဘာသာ (348) အထူးကဏ္ဍ (2,081) အိတ်ဖွင့်စာ (22) အထောက်ထားများ (192) အထွေထွေ (39) အခြားကဏ္ဍ (2) အခြားဘာသာ (7) ဥပဒေ (218) ဆောင်းပါးများ (4,571) ပေါ်လစီ (881) ရွေးကောက်ပွဲ (167) မြန်မာ – English (9) မြန်မာစကားပုံ (7) Burmese Version (1) Census (166) Contact (6) Dictionary (14) English Dictionary (7) Other Dictionary (2) Discovery (109) Election (3) English – မြန်မာ (11) English – Rohingya (3) English Version (1,721) Articles (768) Documents (112) History (298) Arakan History (226) Burmese History (59) M-M History (46) Scripts (5) World History (47) Interview (23) Laws (14) News (1,055) Breaking News (283) Local News (294) Open Letter (12) Other News (10) World News (642) Religious (43) Islamic (41) Other Religious (2) English-Myanmar, Pali-Myanmar (1) General (263) Introduction (5) Link (260) Movie (197) Other Dictionary (6) Photos (759) Popular Post (5) Rohingya – English (10) Special (5) Videos (427) Website (43)
Archives ယခင် ပိုစ်များဖတ်ရန် Select Month March 2020 (54) February 2020 (72) January 2020 (69) December 2019 (143) November 2019 (131) October 2019 (51) September 2019 (2) July 2019 (3) May 2019 (4) April 2019 (7) March 2019 (4) February 2019 (31) January 2019 (24) December 2018 (9) November 2018 (19) October 2018 (27) September 2018 (51) August 2018 (37) July 2018 (82) June 2018 (86) May 2018 (102) April 2018 (69) March 2018 (78) February 2018 (100) January 2018 (85) December 2017 (116) November 2017 (118) October 2017 (98) September 2017 (118) August 2017 (117) July 2017 (80) June 2017 (14) May 2017 (8) April 2017 (16) March 2017 (11) February 2017 (11) January 2017 (20) December 2016 (50) November 2016 (23) October 2016 (23) September 2016 (15) August 2016 (33) July 2016 (40) June 2016 (41) May 2016 (52) April 2016 (113) March 2016 (96) February 2016 (99) January 2016 (178) December 2015 (140) November 2015 (201) October 2015 (88) September 2015 (93) August 2015 (140) July 2015 (91) June 2015 (93) May 2015 (143) April 2015 (150) March 2015 (150) February 2015 (105) January 2015 (155) December 2014 (289) November 2014 (175) October 2014 (195) September 2014 (166) August 2014 (189) July 2014 (266) June 2014 (184) May 2014 (314) April 2014 (256) March 2014 (242) February 2014 (218) January 2014 (340) December 2013 (258) November 2013 (231) October 2013 (232) September 2013 (234) August 2013 (387) July 2013 (359) June 2013 (533) May 2013 (672) April 2013 (701) March 2013 (717) February 2013 (626) January 2013 (861) December 2012 (712) November 2012 (665) October 2012 (719) September 2012 (449) August 2012 (553) July 2012 (434) June 2012 (541) May 2012 (423) April 2012 (360) March 2012 (87) February 2012 (89) January 2012 (26) December 2011 (83) November 2011 (37) October 2011 (1)